Review nồi chiên không dầu Cosori có tốt không, giá bao nhiêu ? 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Review nồi chiên không dầu Cosori có tốt không, giá bao nhiêu ? 2022 | Muasalebang
Đang Đọc: Review nồi chiên không dầu Cosori có tốt không, giá bao nhiêu ? 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Ukubuyekezwa kwe-Cosori-free fryer engenawoyela ngezansi kuzokusiza ukwazi okwengeziwe ngemvelaphi, imvelaphi, … yalo mugqa. Ngaphezu kwalokho, i-Bapcai.vn iphinde ibonise izici nobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu ukusiza imikhiqizo engenhla izuze izinhliziyo zabasebenzisi.
Kholwa ukuthi amasheya akhethiwe, abalulekile anikezwa yisistimu ngeke akudumaze. Ngakho-ke, ungaphuthelwa noma yiluphi ulwazi oluhle, bafana!
1 Iliphi izwe elokuthosa amafutha e-Cosori?
2 Ingabe i-Cosori engenawo uwoyela ilungile?
2.1 Mayelana nomklamo
2.1.1 Ingxenye yegobolondo
2.1.2 Ithreyi yokuthosa nokukhipha amanzi
2.2 Izesekeli ezifakiwe
2.3 Mayelana nezici
2.4 Mayelana nobuchwepheshe
2.5 Mayelana nokuqina
3 Buyekeza isithombo esingenawoyela se-Cosori, bona manje
3.1 Izinzuzo ze-Cosori-free fryer
3.2 Ukungalungi kwe-Cosori air fryer
4 Amamodeli okufanele uwasebenzise lapho ukhetha i-Cosori-free fryer
4.1 I-COSORI CP137-AF 3.5 litres engenawoyela engenawoyela
4.2 I-COSORI CP158-AF(Okubomvu) Isithosi Samafutha Amahhala
4.3 I-Cosori CP158-AF 5.5L
4.4 I-COSORI CO158-AF
5 Iyiphi i-Cosori air fryer engcono kakhulu ongayithenga?
Iliphi izwe elokuthosa amafutha e-Cosori?
I-Cosori-free-free fryer iwumkhiqizo we-Cosori brand. Leli bhizinisi livela e-US. Le nkampani eshiwo ngenhla idume ngochungechunge lwemikhiqizo efana nohhavini, amaketela, abenzi bekhofi, njll. Amafriji angenawoyela e-Cosori nawo angomunye wemigqa eletha imali enkulu enkampanini eshiwo ngenhla.
Ngezici eziningi zesimanje kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza baseMelika, isithombo se-Cosori esingasebenzisi uwoyela njengamanje sisemikhiqizweni edayiswa kakhulu endaweni enkulu kunazo zonke emhlabeni ye-e-commerce i-Amazon.
I-Cosori wumkhiqizo odumile wezisetshenziswa zasendlini ovela e-US
Thenga I-Genuine Cosori Fryer Ku-Lazada Lapha
Thenga i-Genuine Cosori Fryer Ku-Shopee Lapha
Ngakho Ingabe i-Cosori engenawo uwoyela ilungile? Yimiphi imiklamo ekhethekile lo mugqa onayo? Sikumema ukuthi wabelane ngalokhu okulandelayo ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe okuthakazelisayo. Iziphakamiso ezilethwa yi-Bapcai.vn zizokusiza ukuthi wenze ukukhetha okuhlakaniphile maduzane lapho uzingela ibhodwe elifanele umndeni wakho!
Ingabe i-Cosori engenawo uwoyela ilungile?
Ufuna ukuphendula umbuzo ngendlela efanele Ingabe i-Cosori engenawo uwoyela ilungile, ukumema ukuthi ungene emininingwaneni ukuze uhlukanise ingxenye ngayinye eyenza lo mugqa webhodwe. Kusukela lapha, sinesisekelo sokuhlola umkhiqizo ngokunenhloso.
I-Cosori-free fryer engenawoyela inomklamo oyisilinda owenziwe isitayela ngamathoni amnyama, abomvu namhlophe. Ngenxa yale mibala, umkhiqizo uletha isitayela esiqinile nesiyinkimbinkimbi. Ngesikhathi esifanayo, iphinde ikusize ugweme ukwenzeka kwebhodwe elimbozwe ngothuli, amafutha, njll.
Ikakhulukazi, ama-pluses alandelayo asiza umugqa womkhiqizo ongenhla ngokushesha “ubambe amehlo” amakhasimende amaningi ahlakaniphile:
Igobolondo langaphandle lebhodwe lenziwe ngepulasitiki eyisisekelo engenabuthi. Lo mugqa unokumelana nokushisa okuhle, ukumelana nokuklwejwa, ukumelana nomthelela, njll., ngakho uhlala isikhathi eside ngendlela emangalisayo.
Ingxenye engenhla yebhodwe isebenzisa isikrini esinezinkinobho zokusunduza ezifanelekile. Ukusebenza okulula, okuguquguqukayo nokunembayo kukusiza ukuthi usheshe usethe izindlela zokuthosa ngendlela othanda ngayo.
Umkhiqizo unesibambo esihlangene kodwa esiqinile. Ngakho-ke, ungakwazi ukuphatha kalula futhi uqinisekise ukuphepha ngesikhathi sokupheka.
I-Cosori-free fryer-free-free fryer inobuhle obuthambile nobunempilo obunombala omnyama ogqamile
Ikakhulukazi, ukwakheka kwekhava yebhodwe le-Cosori nakho kuyakwazi I-Anti-Fingerprint. Ngenxa yalokho, uhlala unomkhiqizo omusha omuhle, ohlanzekile, futhi ohlanzekile lapho ubeka phambili lolu hlobo lomkhiqizo.
Ithreyi yokuthosa nokukhipha amanzi
Ithreyi lokuthosa nobhasikidi webhodwe kwakhiwa ngokwehlukana. Ngakho-ke, ungakwazi ukuqaqa kalula ukusetha ukudla kanye nokuhlanzeka lapho kudingeka.
Le ngxenye yenziwe ngensimbi engagqwali ukuvimbela ukuwohloka kokudla futhi isize umkhiqizo uhlale isikhathi eside.
Ithreyi lokuthosa le-Cosori air fryer liqine kakhulu, liwumugqa ojwayelekile wokulwa nokugqwala.
Ngokungafani nezithosa zomoya eziningi zamanje, i-Cosori inomklamo webhasikidi wokuthosa oyisikwele. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukubamba inani elikhulu lokudla ngaphandle kokudonsa kanzima ukuze ugobe. Futhi, sithosa kalula idada/inkukhu yonke izoso yokosa ekhaya.
Ubhasikidi we-square Cosori air fryer ukhulisa kakhulu indawo yokugcina ukudla
I-Cosori ayiwaphoxi amakhasimende uma kuziwa ekuletheni 13 imisebenzi pheka. Ungagcina ukufudumala, ukuthosa, ukubhaka, njll ukudla kalula.
Ngenxa yalokho, asikho isidingo sokuthi siye kude ukuze sishintshe izitsha futhi silungiselele ukunambitheka okuningi okungajwayelekile ukuze wonke umndeni ukujabulele.
Ikakhulukazi, ibhodwe liphinde lihlanganise namadivayisi eselula, okukuvumela ukuthi usethe izindlela zokupheka kufoni yakho. Lokhu kuletha okuhlangenwe nakho okungajwayelekile, ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yabasebenzisi. Yilokhu okwenza iCosori ihluke.
I-Cosori ivumela amakhasimende ukuthi axhume kumadivayisi ahlakaniphile ukuze enze izinhlelo zokupheka ezilula
Ngaphezu kwalokho, lo mugqa wamafriji womoya uphinde usize ukuthi ungeze umuzwa owanelisayo ngenxa yezici eziningi ezifana nalezi:
Kunamazinga okushisa ayi-11 asethiwe kanye nezilungiselelo zesikhathi sokupheka, abasebenzisi badinga nje ukukhetha.
Kunezikhumbuzi/izaziso uma ukudla sekulungile.
Inomsebenzi omuhle kakhulu wokugcina ukushisa.
Ingakwazi ukuguqula isuka ku-degree F iye ku-C ngokuguquguqukayo.
Ubuchwepheshe be-Air Crisp bubhekwa “njengekhadi le-trump” ukusiza i-Cosori-free fryer ilethe izitsha ezimnandi nezinuka kamnandi. Ihlanganiswe nefeni ye-convection ehlelwe ngobuhlakani, ibhodwe likusiza ukupheka ukudla 2 izikhathi ngokushesha uma kuqhathaniswa nohhavini bendabuko.
Ikakhulukazi, ngalo mugqa, sinawo Isusa u-85% wamafutha amaningi. Ngakho-ke, ukudla kugcina zonke izakhi ezibalulekile futhi kugwema izithako eziyingozi empilweni yakho kalula.
I-Cosori idume njengomugqa “webhodwe lamatshe” ngenxa yokusebenza kwayo okuzinzile, akuvamile ukuthi kube namaphutha amancane. Ngakho-ke, uma ufuna ibhodwe ukukusiza ugweme ukufaka izindleko zokulungisa nokushintsha, njll, khona-ke lokhu akuyona into embi.
Buyekeza isithombo esingenawoyela se-Cosori, bona manje
Ukubuyekezwa kwe-Cosori-free fryer engenawoyela Okulandelayo kuzokusiza ukuthi ubone ngokucacile ama-pluses nama-minuses alo mugqa. Ngenxa yalokho, sinezizathu ezengeziwe zokucabangela ukuthi yimuphi umkhiqizo omusha ongawukhetha.
Izinzuzo ze-Cosori-free fryer
Ngamasheya akamuva, kulula ukubona ukuthi i-Cosori-free fryer iletha amaphuzu amaningi ahlanganisiwe afana nalawa:
Lo mkhiqizo unamamodeli amaningi ongakhetha kuwo ukukusiza ukuthi uthole umkhiqizo ofanele izidingo zakho maduze.
Ibhodwe linemibala emithathu mhlophe, bomvu, mnyama enemibala emisha, ebukhali, eyiqiniso. Umklamo omuhle futhi othambile womkhiqizo ubuye ukhulise ugqozi, okwenza indawo yasekhishini ibe nokunethezeka kanye neklasi.
Ukuba nobuchwepheshe be-Air Crisp kupheka ukudla ngokushesha izikhathi ezi-2 kunohhavini abavamile.
Isusa amafutha afika ku-85% ukuze ukudla kunambitheke futhi kunempilo.
Ukuba nezinhlobonhlobo zezindlela zokupheka, ezifanele ukudla okuningi okuhlukene.
Okufakekayo, amamodeli amaningi esimanje angaxhumeka kumadivayisi ahlakaniphile.
I-Cosori-free fryer inikezela ngenzuzo yokuba nobuchwepheshe besimanje bokuthosa, isuse ngempumelelo amafutha amaningi
Ukungalungi kwe-Cosori air fryer
Kodwa-ke, ibhodwe le-Cosori nalo linamaphuzu wokususa:
Umkhiqizo unezindleko eziphezulu.
Awukho umsebenzi wokukhipha iphunga njengemigqa yaseKorea.
Izingxenye lapho zidinga ukushintshwa noma ukulungiswa kunzima ukuzithola.
Kulula ukuthenga imikhiqizo mbumbulu emakethe.
Amamodeli okufanele uwasebenzise lapho ukhetha i-Cosori-free fryer
Kuyabonakala ukuthi i-Cosori-free fryer iyinani elihle lomugqa wemali. Ngakho-ke, kuwufanele kahle ukutshalwa kwezimali ukuba nebhodwe elihle lalolu hlobo. Kodwa-ke, iyunithi engenhla ayinikezi kuphela imodeli eyodwa, kodwa futhi inikeza izinketho eziningi ezihlukahlukene.
Ngenxa yalokho, abantu abaningi bayazibuza Iyiphi i-Cosori engcono kakhulu yokuthosa uwoyela? kufanele asebenzise. Uma ungomunye wabo, ukusikisela okulandelayo kufanelekile ukukufunda!
I-Bapcai.vn izokwabelana ngemininingwane mayelana nemigqa ethandwa abantu abaningi. Ngaleyo ndlela, kulula kuwe ukuthi ukhethe ukuthi yimuphi umkhiqizo okulungele:
I-COSORI CP137-AF 3.5 litres engenawoyela engenawoyela
I-COSORI CP137-AF 3.5 litres engenawoyela engenawoyela ifanele amakhasimende ngamanye noma imindeni emincane. Umkhiqizo ugqama ngesikrini sokuthinta se-LED esintekenteke futhi esihle. Lo mugqa ubuye ube nethoni emnyama eqinile futhi ufihla ngempumelelo amabala.
Ngaphezu kwalokho, idizayini yentambo yamandla ehoxiswayo nayo iyiphuzu elihle lokuhlanganisa elilethwa i-Cosori kubasebenzisi. Ngakho-ke, uthola kulula futhi wonge isikhala lapho ungadingi ibhodwe elibalulekile.
I-COSORI CP137-AF 3.5 litre-free fryer ilungele amakhasimende ngamanye noma imindeni emincane
Thenga i-Genuine COSORI CP137-AF 3.5 litre Air Fryer Lapha
Ngokuvamile, le modeli inezici eziyisisekelo zokuthosa, izindlela ezimbalwa ezithuthukile. Kodwa-ke, uma uyisebenzisela umndeni futhi udinga kuphela ukubhaka nokuthosa ukudla, lokhu kuyisinqumo esinengqondo.
I-COSORI CP158-AF(Okubomvu) Isithosi Samafutha Amahhala
I-Cosori CP158-AF inamandla angu-5.8L, ngakho ilungele iningi lemindeni yaseVietnam. Umkhiqizo wenza kube lula ukuwosa inkukhu/idada lonke. Lo mugqa webhodwe unemibala emithathu ethambile emnyama, ebomvu nemhlophe. Lena inketho ukukusiza wenze izitsha eziningi okumnandi ezifana:
I-Cosori CP158-AF 5.8L i-fryer engenawoyela ifanele imindeni yabantu abangu-4-6
Bheka ku-COSORI CP158-AF(Red) 5.5L Isithosi Samahhala Samafutha Lapha
Ithoni ebomvu yokunethezeka nethambile futhi isiza lo modeli ukuba uthandwe abantu abaningi. Uma unoMlilo noma Umhlaba, ungaphuthelwa izinketho ezishiwo ngenhla ezibalulekile.
I-Cosori CP158-AF 5.5L
I-Cosori 5.5L ifakwe uwoyela engenawoyela Izilungiselelo eziyi-10 zokuthosa okuzenzakalelayo. Ngokuthinta okukodwa nje, ungakwazi ukulungisa kalula izitsha ezimnandi ngokuthanda kwakho.
I-Cosori 5.5L i-fryer engenawoyela inezindlela eziyi-10 ezisethiwe ngaphambilini
Bheka ku-COSORI CP158-AF 5.5L Isithosi Samahhala Samafutha Lapha
Lo mugqa ufakwe izesekeli ezihlanganisa:
Ifriji engenawo uwoyela.
Ngaphezu kwalokho, imodeli inombala omnyama oletha isitayela esiyinkimbinkimbi, esinempilo, … ukusiza ikhishi lomndeni wakho ukuba libe yiklasi futhi linethezeka.
I-COSORI CO158-AF yesithosi esingasebenzisi uwoyela sisebenza ebangeni lokushisa elingu-77-205 degrees Celsius. Lolu chungechunge lunobukhulu obungu-23 x 9.5cm futhi lunesisindo esingu-5.5kg.
I-COSORI CO158-AF isitofu esingenawo uwoyela sivumela izitsha ezihlwabusayo ezimnandi ngaphandle kwamafutha
Ngomklamo ongenhla, umkhiqizo ukusiza ukuthi ulondoloze isikhala esiningi sekhishi. Ngesikhathi esifanayo, sisalungisa kalula izitsha eziningi ezimnandi. Umkhiqizo ufakwe ubuchwepheshe be-Air Crip ukusiza ukushisa Ukujikeleza kwe-360 degree ngokusho kwe-vortex.
Izinto ezingenhla zisiza ukudla ukuthi kupheke ngokushesha futhi ngokulinganayo. Ngakolunye uhlangothi, ubumnandi bu-crispy ngisho nangaphandle kwamafutha.
Iyiphi i-Cosori air fryer engcono kakhulu ongayithenga?
Kulula ukubona ukuthi imodeli ngayinye engenhla inezinzuzo zayo ezivelele. Inawo wonke amaphuzu we-plus i-Cosori ehlonyiswe ngawo futhi imvamisa ihluka ngomthamo kanye nezinye izici zesimanje ezengeziwe. Ngakho-ke, kufanele ucabange ngokucophelela ukuze wazi ukuthi yikuphi ukukhetha okulungile.
Imodeli ye-Cosori CP158-AF yokuthosa uwoyela engenawoyela iyona edume kakhulu e-Vietnam
Kodwa-ke, i-Cosori CP158-AF yokuthosa uwoyela engenawoyela okwamanje idume kakhulu eVietnam. Ngokungeziwe kumthamo ofanele, ama-pluses alandelayo asiza lolu hlobo lube nezinzuzo ezengeziwe:
Ibhodwe linamandla okuxhuma kumadivayisi ahlakaniphile ukwenza inqubo yokupheka ibe lula futhi ijabulise.
Isibali sikhathi esishintshekayo, esivumelana nezimo.
Ingacisha ngokuzenzakalelayo lapho kushisa kakhulu, ikhuphula ukuphepha.
Ithreyi lokuthosa, ibhodwe elingaphakathi kulula ukulihlanza.
Ngokwabelana njengamanje, sethemba ukuthi uyaqonda kabanzi mayelana nesithombo esingenawoyela se-Cosori. Lo mugqa uphethe uhlobo lwaseMelika olunobuchwepheshe besimanje, ngakho-ke uya ngokuya usetshenziswa abasebenzisi abaningi kakhulu.
Uma i Ukubuyekezwa kwe-Cosori-free fryer engenawoyela Okungenhla akugculisi, vumela i-Bapcai.vn ikusize okwengeziwe. Ungakhohlwa ukuxhuma ukuze sikulethele ulwazi oluwusizo kakhulu!
4.9/5 – (76 amavoti)
Xem Thêm Top 5 Máy ảnh film loại nào tốt nhất cho người mới bắt đầu | Muasalebang
Nước tẩy trang môi là gì? 10 sản phẩm tốt nhất được khuyên dùng 2022 | Muasalebang